Ogaden News Agency (ONA) – Dalxiisayaashii & Maalgashatadii oo Iskaga Huleelay Itoobiya Ogow Sababta.
Dalxiisayaashii & Maalgashatadii oo Iskaga Huleelay Itoobiya Ogow Sababta.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in wadanka qalalaasuhu hadheeyay ee gumaysiga Itoobiya ay xamaankooda ka uruursadeen dhamaan dadkii shisheeyeha ahaa ee kusugnaa wadankaas wuxuuna si dhakhso ah wadanku isugu badalay meel ay shisheeyuhu kacaagan yihiin.
Sida aan xogta kuhelayno waxaa wadanka iskaga huleelay shakhsiyaadkii yaraa ee wadankaas dalxiis ama maal gashi ujoogay waxaana lasheegayaa in ay yaraatay rajadii laga qabay in ay dad ajnabi ah sii joogi karaan wadankaas.
Dowladaha ree galbeedka ayaa horaan shacabkooda uga digay joogitaanka iyo aaditaanka wadanka gumaysiga Itoobiya waxaana wadamada dadkooda uga digay Itoobiya kamid ah Maraykanka, Canada, Ingiriiska, Norway, Germany, Turkey iyo Australia.
Dhamaan wadamadan ayaa ah kuwii ubaar fidhi jiray xukuumada wayaanaha islamarkaana siin jiray dhaqaalaha waxayna xaaladu hada gaadhay in eedayn laysu mariyo ideecadaha isla markaana ay wadamadaasu dadkooda kala baxaan wadanka ay colaaduhu aafeeyeen.
Dibad baxayaasha kasoo horjeeda xukunka kali talisnimada ku dhisan ee TPLF ayaa bartilmaameed saday goobaha ay ajaanibtu kuleeyihiin ganacsiga waxyna dibad baxayaashu cagta mariyeen beero iyo warshado badan oo ay lahaayeen dad ajaanib ah oo kooxda TPLF ay lacago kaga badalatay dhul ay lahaayeen qoomiyadaha dulman.
Umuurtan ayaa keentay in dhaqaalihii yaraa ee wadanka Gumaysiga Itoobiya uu si xowli ah hoos ugu dhaco iyadoo gobolada qaar laga soo sheegayo macaluul iyo caafimaad xumo.